मेलम्चीको पानी चैतभित्रै उपत्यकामा आउला? | Alagdhar
घरBanner Newsमेलम्चीको पानी चैतभित्रै उपत्यकामा आउला?
मेलम्चीको पानी चैतभित्रै उपत्यकामा आउला?
काठमाडौं – मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा खस्नेबित्तिकै उपत्यकामा वितरणका लागि तयारी भइरहेको छ।
पाइप बिच्छ्याउन भत्काइएको सडकमध्ये ६१ किमी सडक विभागलाई कालोपत्रका लागि सम्झौता भई काम शुरु भएको छ। विभागले रु ८५ करोडको लागतमा निर्माण एवं कालोपत्र गर्नेछ। १०० किमी सडक निर्माण एवं कालोपत्र भने निर्देशनालय आफैँले गर्नेछ। यसको लागत रु एक अर्ब छ। भत्काइएकामध्ये २८ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकादेखि काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलसम्मको २७।५ किमी दूरी सुरुङमध्ये अब ३०० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ। सुरुङको ३०० मिटरको काम सकेरभित्रको कामलाई अन्तिमरुप दिई चैत १५ अर्थात् मार्चको अन्तिमसम्ममा पानी उपत्यकामा खसाल्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ।
उपत्यकामा पानी वितरण गर्न ८४ हजार २१७ घरमा धारा जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४५ हजार १८६ घरमा धारा जडान भइसकेको प्रवक्ता ढकालले सुनाए। सुन्दरीजलमा आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ। अर्को आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ। दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पनि १७/१७ गरी ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने तयारी भइरहेको छ। मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकावासीलाई दैनिक पाँच घण्टासम्म र याङ्ग्री र लार्के खोलाको समेत गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउन थालेपछि २४सै घण्टा पानी वितरण गर्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ। रासस
अघिल्लो लेखमाविरोधले छोएन दीपिकाको ‘पद्मावत’लाई, पहिलो दिनमै गतिलो आम्दानी
अर्को लेखमायौन सन्तुष्टिको अभावमा मानसिक रोग